मृत्युपछि शरीरमा के हुन्छ ?
मंसिर ३, २०७४ आइतवार २३:११:०५ प्रकाशित
फिल्ममा हामी देख्ने गर्छौं– कसैको मृत्यु भयो भने वरिपरि रहेका मानिसले उसको आँखा सुरुमै बन्द गरिदिन्छन्। आँखा खुला पारेर कसैको प्राण गएको छ भने हामी पनि सुरुमा शवको आँखा बन्द गरिदिनेगर्छौ। यसो किन गरिन्छ?
यसो गर्नुपछाडि कारण छ। मृत्युपछि शरीर चिसिन थाल्छ। शरीर चिसिँदै गएपछि समग्र शरीर कडा हुन्छ। यसको आरम्भ आँखाको ढकनबाट हुन्छ। पहिले आँखाको ढकन कडा हुन्छ र त्यसपछि शरीरका बाँकी भाग कडा हुँदै जान्छन्।
झट्ट हेर्दा मृत्यु भनेको अकस्मात घटिन हुने क्रिया हो जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि कसैलाई पानी ख्वाउँदासम्म ऊ जीवित हुन्छ। पानी ख्वाउनासाथ उसको मृत्यु हुन्छ। अर्थात्, केही सेकेन्डमै उसको मृत्यु हुन्छ।
तर, मानिसको अकस्मात मृत्यु हुन्छ र जीवन भनेको स्विच थिचेपछि बत्ती झ्याप्प निभेजस्तै हो भन्ने मान्यता गलत छ। श्वारप्रश्वास रोकिएपछि शरीर क्रमशः मर्दै जान्छ भन्नेमा विज्ञान र अध्यात्म दुवैको मत मिल्छ।
विज्ञानसम्बन्धी विषयमा लेख्दै आएकी राचेल नुवेरको एउटा लेख सन् २०१३ को अगस्टमा बिबिसीको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित भएको थियो, जसमा उनले जीवन र मृत्युको साँधसीमासँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिकहरुको कुरा पनि उल्लेख गरेकी थिइन्।
उनी र लेखमा उनले उदृत गरेका सबै वैज्ञानिकको भनाइ के थियो भने, श्वासप्रश्वास बन्द भएपछि पनि मानिसको मृत्यु भएको हुँदैन। भर्खरै मरेको मानिसको दिमाग पूर्वअवस्थामा आउन नसक्नेगरी ड्यामेज भइसकेको हुँदैन। मानिसको पूर्ण मृत्युका लागि दिमाग पूर्ण रुपमा मर्नुपर्छ। तर, शरीरका थुप्रै अंगको मृत्यु भइसकेपछि अन्त्यतिर मात्रै दिमागको मृत्यु हुने गर्छ।
मुटु धड्किन छोडेको घन्टौँसम्म पनि शरीर बाँचिरहेको हुन्छ। यस्ता केही घटनाबारे लेखमा उनले चर्चा गरेकी छिन्। ‘कार्डिक एरेस्ट’पछि मृत्यु भयो भनी ठानिएका अमेरिकाको फिलाडेल्फियाका एक व्यक्ति र विष सेवनपछि मुटु रोकिएको घन्टौँपछि पुनः जीवित भएकी एउटी जापानी महिलाको कहानीबारे पनि उनले लेखमा उल्लेख गरेकी छिन्। संसारभरि जारी गरिने ९५ प्रतिशत मृत्यु प्रमाणपत्रमा चाहिँ मुटुको धडकन रोकिएको क्षणलाई आधार मानेर मृत्युको क्षण तय गरिन्छ।
सन् २०१५ को मेमा न्युरोबायोलोजिस्ट मोहेब कोस्टान्डीले मृत्युपछि शरीरमा आउने परिवर्तनबारे अनुसन्धानमूलक लेख लेखेका थिए। लेखमा उनले श्वास र मुटुको धड्कन रोकिएपछि शवमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्नेबारे उल्लेख गरेका थिए।
मृत्यु भएको केही समयपछि शरीर कुहिन सुरु हुन्छ। मुटु धड्किन बन्द भएपछि शरीरका कोषिकाहरुले अक्सिजन पाउँदैनन्। शरीरभित्र हुने रासायनिक प्रतिक्रियाका कारण बन्ने विकारलाई अक्सिजनले निस्क्रिय तुल्याउनेगर्छ। अक्सिजनको अभावमा शरीरभित्र त्यस्ता विकार थुप्रिँदै जान्छन्, जसले गर्दा शरीरको अम्लीयपनमा निरन्तर वृद्धि हुँदै जान्छ।
शरीरभित्र कोषिकाले उत्सर्जन गरेका ‘इन्जायम्स’ले कोषिकाका बाहिरी पत्र ‘मेम्ब्रेरन्स’लाई धमाधम मार्न थाल्छन्। बाहिरी पत्र नस्ट भएपछि कोषिकाहरु पनि मर्न थाल्छन्। प्रायः सबैभन्दा पहिले कलेजोका कोषिका मर्न थाल्छन्। अन्त्यमा दिमागका। किनकि कलेजोमा ‘इन्जायम्स’ प्रचूर मात्रामा हुन्छ। दिमागमा चाहिँ पानीको मात्रा बढी हुन्छ।
कोषिकाको मृत्यु हुन थालेपछि क्रमैसँग शरीरका तन्तु (कोषिकाहरुको समूह) र अंग मर्न थाल्छन्। रक्तबाहिनीहरु फुट्न थाल्छन्। रक्तबाहिनी फुटेपछि ड्यामेज भइसकेका रक्तकोषिकाहरु बाहिर पोखिन्छन्। यसरी पोखिएका रक्तकोषिका ससाना नशा (शिरा) र कोषिकामा जम्न पुग्छन्। यो चरणमा पुगेपछि शवको रङ उड्न थाल्छ। शव पहेँलो र फुङ्ग उडेजस्तो देखिने चरण यही हो।
मृत्युपछि शरीरको तापक्रम झर्न सुरु हुन्छ। शरीरभित्रको ताप सेलाउँदै जान्छ र यो बाहिरी वातावरणले निर्देश गर्ने तापक्रममा आएर अडिन्छ। यति बेला शवलाई छामियो भने चिसो महसुस हुन्छ। त्यसपछि शरीरका अंगहरू कडा हुने क्रम सुरु हुन्छ।
शवमा ताप रहुन्जेल हात, खुट्टालगायत बाहिरी अंग खुम्चिएका छन् भने सिधा पार्न सकिन्छ। जब यो चिसिएर कडा बन्छ, तब यसलाई सिधा पार्न अथवा खुम्चाउन सकिँदैन। चिसो भइसकेको शवको औँला बांगिएको छ भने यसलाई सिधा पार्न सकिँदैन।
शरीरको अंग कडा हुने क्रम सबैभन्दा पहिले आँखाको ढकनबाट सुरु हुन्छ। ढकन कडा भएको केही बेरपछि आँखा भासिन थाल्छ। त्यसपछि जिब्रो र गाला कडा हुन्छ। अनि चिउँडो र घाँटीका मांशपेशी कडा हुन्छन्। घाँटीपछि कम्मरदेखि माथिको भाग कडा हुन्छ। अनि यस्तो कडापन जाँघसम्म फैलिन्छ।
जिउँदो शरीरमा ‘एक्टिन’ र ‘मायोसिन’ नाम गरेका दुई प्रकारका प्रोटिन पाइन्छन्। यी प्रोटिनका कारण मांशपेसीका कोषिकाहरुले फैलिने र साँघुरिने काम गर्छन्। यसले शरीरलाई लचक बनाएको हुन्छ। तर, मृत्युपछि मांशपेसीका कोषिकाहरु यी प्रोटिनबाट वञ्चित हुन्छन् र मांशपेसी कडा बन्छ। जोर्नीले पनि हलचल गर्न पाउँदैन।
हाम्रो शरीरमा असंख्य माइक्रोब्याक्टेरियाले बास गरेका हुन्छन्। मृत्युपछि ती विस्तारित हुन थाल्छन्। सन् २०१४ को अगस्टमा अलबमा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिक गुल्नाज जाभानले मृत्युपछि शरीरमा फैलिने ब्याक्टेरियाबारे अनुसन्धान गरेका थिए।
आत्महत्या, हत्या, लागूऔषधको ओभरडोज, सवारी दुर्घटना अदिमा परी ज्यान गुमाएका मानिसको शरीरमा माइक्रोब्याक्टेरियाको अवस्थाबारे उनले अध्ययन गरेका थिए। त्यस्ता शवबाट उनले तन्तुहरूको स्याम्पल लिएका थिए। स्याम्पलको अध्ययनबाट उनले रोचक कुरा पत्ता लगाए।
‘जीवित मानिसको भित्री अंगहरु ब्याक्टेरियामुक्त जस्तै हुन्छन्, किनकि शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमताले उनीहरुलाई भित्री अंगहरुमा छिर्नबाट रोक्ने गर्छ। जब मानिसको मृत्यु हुन्छ, तब उसको रोग प्रतिरोधी क्षमता पनि समाप्त हुन्छ। त्यसपछि ब्याक्टेरियाहरुलाई शरीरभित्रका सबै अंगमा फैलिने मौका मिल्छ,’ न्युरोबायोलोजिस्ट मोहेबले आफ्नो लेखमा जाभानलाई उदृत गरेका छन्।
मृत्युपछि ब्याक्टेरिया सबैभन्दा पहिले नाइटोपछाडि रहने सानो र ठूलो आन्द्रा जोडिएको ठाउँमा फैलिन्छ। अरुबेला ब्याक्टेरिया फैलियो भने एन्टिबायोटिक खाएर मार्ने गरिन्छ। तर, शवलाई एन्बिायोटिक दिइँदैन। त्यसले गर्दा ब्याक्टेरियाले दुबै आन्द्रालाई काम नलाग्नेगरी बिगारिदिन्छ।
त्यसपछि आद्रा वरिपरिका तन्तुहरुलाई नस्ट गर्न थाल्छ। ड्यामेज भएका कोषिकाबाट निस्किने तरल पदार्थले ब्याक्टेरियाहरुलाई थप ऊर्जा प्रदान गर्छ। यसबाट उनीहरु शरीरभित्र थप क्रियाशिल हुन्छन् र शरीरका सबै अंगलाई धमाधम नष्ट गर्न थाल्छन्।
आन्द्राबाट पाचन प्रणालीको महत्वपूर्ण अंग ‘क्यापिलरी’लाई ब्याक्टेरियाले नस्ट गर्छ। त्यसपछि कलेजो र फियो (रक्त संरचना रुपान्तरित गर्ने आमाशयको माथिल्लो भागस्थित कोमल अंग) लाई यसले काम नलाग्ने गराउँछ। फियोपछि मुटु र दिमागमा ब्याक्टेरिया फैलिन पुग्छ।
जाभान र उनको टिमले मृत्यु भएको २० देखि ४० घन्टा भइसकेका विभिन्न शवबाट स्याम्पल झिकेर अध्ययन गर्दा यस्तो निष्कर्ष निस्किएको थियो। अन्त्यतिर ब्याक्टेरियाहरुले प्रजनन् अंगलाई नस्ट गर्छन्।
मृत्युलाई पराजित गर्ने कोसिस पनि वैज्ञानिकहरु लाग्दै आएका छन्। तर, यसमा उनीहरुले सफलता हात पार्न सकेका छैनन्। साथै सफल हुने आशा पनि उनीहरुले गरेका छैनन्। यद्यपि प्रयास चाहिँ जारी राखेका छन्।
मानिसको मृत्यु हुन लाग्दा कोषिका तथा तन्तुहरु कमजोर हुँदै मृत्युतर्फ उन्मुख हुन पुग्छन्। यस्ता कोषिका र तन्तुलाई पुनः जीवन दिन औषधि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। कोषहरुको ऊर्जाको स्रोत ‘माइटकान्ड्रिअन’ हो। वैज्ञानिकहरु ऊर्जाको यही स्रोतलाई सक्रिय गराउने औषधि विकास गर्न लागिपरेका छन्। त्यस्तै, कोषिकाहरु मार्ने ‘क्याल्पेन’ नाम गरेको इन्जायममाथि अवरोध सिर्जना गर्ने औषधि विकासका लागि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।
तर, यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने शरीरका कोषिका कसरी मर्छन् भन्ने कुराबारे वैज्ञानिकहरुले थोरै मात्र थाहा पाउन सकेका छन्। यसकारण कोषिका मर्ने प्रक्रियालाई रोक्ने विधि विकास गर्न सकिरहेका छैनन्। सायद, कोषिका मर्ने प्रक्रिया थाहा हुँदो हो त यस्तो प्रक्रिया रोक्न सक्ने औषधि बनाउन सकिन्थ्यो।
वैज्ञानिक मतजस्तै आध्यात्मिक मतले पनि शरीर अचानक मर्दैन भन्छ। शरीर क्रमैसँग मर्छ भन्ने पुष्टि गर्न हिन्दू धर्मशास्त्रले प्राणलाई विभिन्न भागमा विभाजित गरेको छ।
भारतीय राज्य तमिलनाडूको कोइमबटोर सहरमा ‘इसा फाउन्डेसन’ नामक संस्था स्थापना गरेर विभिन्न राष्ट्रमा योग र अध्यात्मसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका सद्गुरु जग्गी बासुदेवका अनुसार हिन्दू धर्मशास्त्रले प्राणका पाँच प्रकार ‘सामन’, ‘प्राण’, ‘उदान’, ‘अपान’ र ‘व्यान’बारे चर्चा गरेको छ। डाक्टरले कुनै व्यक्तिलाई मृत घोषणा गरेको २१ देखि २४ मिनेटमा सामनले शरीरलाई छोड्न थाल्छ। सामनले शरीरमा तापक्रम सन्तुलनमा राख्ने भएकाले यसले छोड्दै गर्दा शरीर क्रमशः चिसो हुँदै जान्छ।
मृत्यु भएको ४८ देखि ६४ मिनेटमा प्राणले शरीर त्याग्छ। त्यस्तै मृत्यु भएको ६ देखि १२ घन्टामा उदान शरीरबाट बाहिरिन्छ। उदान मुक्त नभइन्जेल शवमा पुनःजीवन भर्ने तान्त्रिक क्रियाको अभ्यास यदाकदा हुने गरेको उनी बताउँछन्। तर, उदान निस्किसकेपछि यस्तो सम्भावना अत्यन्तै झिनो रहन्छ। मृत्यु भएको ८ देखि १८ घन्टाबीचमा अपान शरीरबाट मुक्त हुन्छ। जीवन जोगाउने मूल तत्वयुक्त प्राण चाहिँ व्यान हो। मृत्यु भएको ११ देखि १४ दिनसम्म व्यान शरीरबाट निरन्तर मुक्त भइरहेको हुन्छ।
उनका अनुसार बुढ्यौलीका कारण सहज मृत्यु भएका मानिसको हकमा मात्र शरीर प्राणमुक्त हुने यो नियम लागू हुन्छ। यस्ता मानिसको जीवन ११ देखि १४ दिनसम्म कुनै न कुनै रुपमा अस्तित्वमा रहन्छ। यस अवधिमा उनीहरुको नङ, दाह्री, कपाल आदि बढिरहन्छ। समाधिस्त गरिएका मानिसको नङ, कपाल आदि बढेको पाइएका विभिन्न प्रमाण छन् पनि। यदि, सक्रिय जीवन बिताइरहेको कुनै मानिसको दुर्घटनामा परेर वा अल्पायुमै मृत्यु भयो भने उसको शवबाट सबै प्रकारका प्राण पूर्णतः मुक्त हुन ४० देखि ९० दिनसम्म लाग्छ।
भारतीय सहर मुम्बईतिर मृत्युपछि शवका दुबै खुट्टाका बुढी औँलालाई एकैठाउँमा बाँध्ने चलन छ। यसो गर्दा शरीरको मूलधरा पनि बाँधिन्छ, जसकारण शरीरबाट मुक्त भइसकेको प्राणले पुनः शरीरभित्र प्रवेश गर्ने प्रयत्न गर्न सक्दैन। मूलधरा लिंग अथवा योनी र गुद्वारबीचको भागमा हुन्छ। यसमार्फत जीवन उत्पत्ति हुने भएकाले यसमा अन्त्यसम्म जीवन रहन्छ।
समग्र शरीर चिसो भइसक्दा पनि मूलधरा चाहिँ तातो नै हुन्छ। र, त्यही मूलधरामार्फत शरीरबाट निस्किँदै गरेका प्राण पुनः शरीरमा प्रवेश गर्न खोज्छन्। दुवै खुट्टा बाँधिदिँदा मूलधरा पनि बाँधिन पुग्छ, जसकारण निस्किएको प्राणले पुनः शरीरमा प्रवेश गर्ने प्रयत्न गर्न सक्दैन। र, निस्किँदै गरेको प्राणले त्यस्तो प्रयत्न नगरेकै राम्रो हो भन्ने आध्यात्मिक मत छ।
धर्मग्रन्थहरुका अनुसार मनिसको मृत्यु भएको आधा घन्टादेखि चार घन्टासम्म उसको दाहसंस्कार गर्नु उत्तम हुन्छ। किनकि शव सामु हुँदा प्रियजनहरुलाई कुनै जादुमयी शक्तिले मृतकलाई पुनर्जीवन दिने पो हो कि भन्ने आस हुन्छ। त्यस्तै, शवबाट निस्किएको प्राणलाई पनि पुनः शरीरमा प्रवेश गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अभिलासा हुन्छ।
यसका लागि उसले प्रयत्न पनि गरिहन्छ। यस्तोमा दाहसंस्कार गरियो भने आफ्नो प्रियजनको जीवन अब चाहिँ सकियो भन्ने महसुस जीवितहरुलाई हुन्छ। मृतकको प्राणले पनि शरीर नै नरहेपछि अब मैले प्रयत्न गर्नु व्यर्थ छ भन्ने महसुस गर्छ र शान्त रहन्छ। यस्तो शान्ति जीवित र मृतक दुवैका लागि लाभकारी हुने मृत्युसम्बन्धी उल्लेख गर्ने विभिन्न हिन्दू धर्मशास्त्रको मत छ।